Qabeenyi Liibiyaa Raandii triliyoona heddutti shallagamu Aafrikaa Kibbaa keessatti dhoksameera jedhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Qabeenyi Liibiyaa Raandii triliyoona heddutti shallagamu Aafrikaa Kibbaa keessatti dhoksameera jedhame
Qabeenyi Liibiyaa Raandii triliyoona heddutti shallagamu Aafrikaa Kibbaa keessatti dhoksameera jedhame
Horiin Liibiyaa triliyoona heddutti laakkayamu Aafrikaa Kibbaa keessaatti dhoksamee akka jiru ‘the Sunday Independent’ gabaase. Akka gabaasa kanaatti irra jireessi horii kunaa dhoksaan kan kaayame Doolaara Ameerikaa fi worqeen. Kan meetiin kaayames jiraachuun gabaafameera. Yeroo ammaa horiin kuni lafa dhoksaa (galma 7) magaalaa Johaansbargii fi Pritooriya jiddutti aramuu fi haalaan eegamu keessatti.
Horiin Liibiyaa kuni kan worqee toonii dhibba hedduu fi meetii kaaraatii miliyoona 6 ta’a jedhamee dubbatamu gara Aafrikaa Kibbaatti kan fe’ame, balali’iinsa xayyaaraa 62 jidduu Triipolii fi Aafrikaa Kibbaa jiddutti taasifameen.
Raandiin Aafrikaa Kibbaa triliyoona 2tti tilmaamamu inni amma saaxilame kuni, maallaqa Raandii biliyoona 260 tti laakkayamu isa Liibiyaa irraa karaa beekamaan bahee baankota Aafrikaa Kibbaa 4 keessatti argamu hindabalatu.
Hedduun horii (maallaqa) kanaa gara Aafrikaa Kibbaatti kan fe’ame yeroo Perezidaant Jaakob Zumaan karaa Gamtaa Aafrikaan ta’uun Prezidaantii Liibiyaa duraanii Mu’ammar Gaadaafiin akka angoo gadi dhiisaniif amansiisuuf yaalaa turanitti. Kunis yeroo worraaqsa Liibiyaa isa 2011 keessa jechuudha.
Akka gabaasa kanaatti, kanniin saamicha horii Liibiyaa kana keessaa harkaqaban angawoota ANC gameeyyii, namoota daldalaan bebbeekamoo ta’an, abbaa seeraa mana murtee ol’aanaa tokko fi kubbaaniyoota dhuunfaati.
Gaadaafiin Onkoloolessa 20, 2011 qabame ajjeefame. Mootummaan worraaqsa Liibiyaa booda angotti dhufe boordii horii biyyattii saamamee fi karaa dhoksaan biyya irraa baye deebisiisu dhaabee tattaafii godhaa ture. Horii Aafrikaa Kibbaatti dhoksamuu hinoolle jedhamu kanas deebisiisuuf kubbaniyaa Ameerikaa lama qaxaree socho’aa jira.
horii liibiyaa aafrikaa kibbaa
qaabeenya liibiyaa saamame
Previous articleArsenaalii fi Cheelsiin Injifataman; Manchastar Siitiin Cheelsitti dhiphise
Next articleKunniin soorata fayyaaf hundarra caalaa (superfoods) jedhamaniidha